Home » အခမဲ့ ကြော်ငြာ »
ဒါကတော့ Best Friends အင်တာနက် ဆိုင် ကြော်ငြာ လေးပါ။
စိတ်ချမ်းမြေ့စွာ အင်တာနက် သုံးလိုက လာခဲ့ပါလို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။
အမှတ် (၁၂) ၊ မြေညီထပ် ၊ အသောကလမ်း ၊ကျောက်မြောင်း ၊ တာမွေ
can i advertise at ur blog ??
Yes ,u can...what product or shop ,u want to advertise at my Blog?Send product Photo to (minnthar.shwe)gmail to me and any word u want to advertise.ok? C U